Etu esi biputere na Instagram site na PC? | Uzoamaka.si
Ulo Nkà na ụzụ Ekwentị mkpanaaka Etu esi eji ozi kọmpụta na Instagram?
Enwere ike izipu foto na kọmputa gị gaa na profaịlụ Instagram gị? Ee, nke ahụ ga-ekwe omume!
Ọ bụrụ n’ichegoro na ị ga - eziga na ngwa ngwa Instagram a ma ama site na ekwentị gị, ị ga - ajoụrị ọ overụ n’isiokwu a. Ọ bụ eziokwu, enwere ike izipu ya na Instagram site na kọmpụta desktọọpụ. Usoro dum nwere ike ọ gaghị adịrị gị mfe, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ ga-ekwe omume.
Yabụ kedu ka esi eziga Instagram site na kọmputa?
Dị ka ị maara, ọ bụ ikenye foto na Instagram site na ekwentị dị mfe. Ezubere Instagram ka ndị ọrụ nwee ike ijide ma kesaa foto site na ekwentị mkpanaaka, ebe ha nwere ike ịbawanye ya na ụfọdụ nzacha na ihe ndị yiri ya. Na kọmputa gị, ị nwere ike ịlele ụdị ihe ahụ ma nye ha ụdị ma ọ bụ ikwu okwu.
Ọfọn, ọ bụghị eziokwu. Nginggbanwe ọdịdị ihe nchọgharị weebụ gị na ihuenyo na ihuenyo ekwentị mkpanaaka ga-eme ka obi sie gị ike iji ngwa weebụ nke Instagram na ekwentị. N'ụzọ dị otú a, ọrụ niile dị na ngwa ahụ n'onwe ya, dịka ị maara ha na ekwentị mkpanaaka gị, ga-adị gị nso na mberede.
Gbanwee ọdịdị ihe nchọgharị weebụ gị na nlegharị anya!
Ka anyị kwuo na ị na-eji ihe nchọgharị Google eme nchọgharị na weebụ Chrome. Gaa na Instagram.com, wee pịa bọtịnụ aka nri na windo oghe, họrọ nhọrọ na ala "Nyochaa". Window maka ndị njikwa ga-emepe na koodu ị na-adịghị mkpa ile anya. Ọ ga-ekwe omume na ihuenyo dị na ihuenyo gị agbanyelarịrị ka ọ bụrụ na ị na-elegharị anya ugbu a. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ịnwere ike ime ya n'onwe gị site na ịpị akara ngosi ekwentị na mbadamba, aka ekpe n’elu igbe koodu.
Voila! Inwere ike izipu foto na Instagram ozugbo kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị hụghị ihe ngosi Homelọ dị mkpa n'okpuru, tinye foto, ref naanị nweta ihe nchọgharị, nke ga-ezuru.
Soro ndị enyi gị kerịta ndụmọdụ a nke nwere ike ịbụ na ha amaghị ya
Ohere ohuru inweta! Network PI Cryptocurrency PI
Ogbaji - Ọnwa Iri na Otu 2, 2019 0
Na 2009 Agbaghara m ohere dị ukwuu na Bitcoins, oge a agaghị m enwe PIs! Pi Network dịkwa maka Slovenia na Slovenes. Gini mere m ...
Kedu ka anyị ga-esi tinye onyinye na Facebook?
Mgbakọ Ọnwa Abụọ 1, 2017
Kedu otu esi eme egwuregwu?
Mgbakọ Ọnwa Mbụ 7, 2017
Mara mma maka ekwentị gị
Ekwentị mkpanaaka 21 Mee, 2019
174Ndị na-eso ụzọSoro
Moneto dochie VALÚ!
Ogbaji - Ọnwa Isii 25, 2019 0